Amaasaaddera Yunaayitid Isteetis, Birayaan Nikolaas
Paartiin biyya bulchu kan Zimbaabwee biyyattiitti amaasaaddera Yunaayitid Isteetis kan ta’an Birayaan Nikolaas seerawwan biyyattii tuffatan jechuu dhaan gamasii akka ba’an dhaadatte.
Dubbi himaan paartichaa Paatrik Chinamasaa tuuta oduuf Haraaree keessatti ibsa kennaniin yoo Nikolaas gochawwan kan akka jeeqama deggeruu, hookkara qindeessuu fi lootee seentummaa leenjisuu itti fufu ta’e hoogganni paartii biyya bulchuu ajaja itti kennuuf boodatti hin jedhu jedhan.
Yaadi Chinamaasaan kennan kun Yunaayitid Isteetis gareeleen mormitootaa hiriira mormii Jimaata geggeessuuf karoorsan kan qixxummaan dinagdee haa jiraatu, mootummaan malaammaltummaa haa dhaabuu fi prezidaant Emmerson Mnaangagawaa aangoo haa gadhiisan jedhu deggertge isa jedhutti fuuleffate.
Haleellaan jechootaa kan paartii ZANU-PF ambaasaaddera Yunaayitid Isteetis irratti darbame Ameerikaan hiriirri farra mootummaa karoorfame utuu hin ga’in guyyoota sadii dura jeeqama biyyattii keessaa maallaqaan deggerte qeeqa mootummaatti aansuun ture.
Dubbi himaan mormitootaa Jaakoob Ngarivhuumee akka jedhanitti hiriirri mormii kun Zimbaabwee dhaaf murteessaa dha.